နှာကြောင်းဖြည့်ခြင်း လုပ်ငန်းများ | Weber Cambodia
လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် ဆန်းပြားတဲ့ ဖြေရှင်းချက်ပေးစွမ်းသော ကုန်စည်များအပြင် သင်၏ကြွေပြားအရောင်နှင့်လည်း လိုက်ဖက်ညီသော နှာကြောင်းဖြည့်ကော် အရောင်အသွေးအမျိုးမျိုးကိုလည်း ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
သမရိုးကျ နှာကြောင်းဖြည့် သရွတ် အသုံးပြုမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ပြဿနာများ
မှန်ကန်သောကုန်စည်များကို ရွေးချယ်အသုံးမပြုနိုင်သောကြောင့် အိမ်ရှင်တော်တော်များများ အခက်ခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်။ ထို့အတွက် အိမ်ရှင်များသည် ထပ်ခါတလဲလဲ မပြီးပြတ်နိုင်သော ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုများဖြင့် စိတ်သောက ရောက်နေကြရပါသည်။ ထိုပြဿနာများသည် လုပ်ငန်းခွင်မစမှီ အချိန်မှစ၍ မှန်ကန်သောကုန်စည်ကို မှန်ကန်သော အသုံးပြုပုံနည်းလမ်းများ အသုံးပြုတတ်ခါမှ စိတ်အေးနိုင်ပါမည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဤပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေး သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
သာမာန်တွေ့ကြုံရလေ့ရှိသော နှာကြောင်းပြဿနာများမှာ -
2. ကျည်းမြောင်းသော နှာကြောင်းလိုင်းအတွင်ထိ ဝင်ရောက် မဖြည့်တင်းပေးနိုင်ခြင်း
3. မာကျောပြီး တုန်ခါမှုရှိသောနေရာများအတွင် အလိုက်ထိုက်ကျံု့ဆန့်မပေးနိုင်သော နှာကြောင်းကော်
4. အဖြူဂျိုးနှင့် ဆားဂျိုးများတက်ခြင်း
5. အကြမ်းခံနိုင်မှုနှင့် သန့်ရှင်းမှု မပေးနိုင်သော နှာကြောင်းကော်
6. ဓာတုဆေးရည် တိုက်စားမှုကို မခုခံနိုင်သော နှာကြောင်းကော်
Weber တွင်နည်ပညာဆိုင်ရာ ကူညီဖြေရှင်းချက်များကို အကြံပေးနိုင်သော နည်းပညာအဖွဲ့နှင့်တိုင်ပင်ဖို့မတုန့်ဆိုင်ပါနှင့်။ သင့်၏ နေချင်စဖွယ်အိမ်လေးကို Weber နှင့်အတူဖန်တီးလိုက်ပါ။
Weber ၏ႏွာေၾကာင္းျဖည့္ေကာ္ သရြတ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ား
မှိုမဲမဆွဲသော အရည်အသွေးမြင့် နှာကြောင်းဖြည့်ကော်များ
Weber မှအညစ်အကြေး တက်ခြင်းနှင့် မှိုမဲထခြင်း စသည့်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့် နှာကြောင်းဖြည့် သရွတ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အိမ်ရှင်များအား အပူအပင်သောက ကင်းဝေး စေမှာဖြစ်ပါသည်။
ကျည်းမြောင်းသော နှာကြောင်းလိုင်းများအတွက် အထူးထုတ် နှာကြောင်းဖြည့်သရွတ်
ဆိုဒ်ကြီးကြွေပြားများဖြင့် အလှဆင်ရာတွင်း ကြွေပြားကြားလိုင်းများ ကျည်းမြောင်းလေ့ရှိသည်။ ထို့အတွက် ကျည်းမြောင်းသော နှာကြောင်းလိုင်းများကြား ထိရောက်စွာ ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သည့် Weber ၏နှာကြောင်းဖြည့်ကော်ဖြင့် ဖြေရှင်းပေနိုင်ပါသည်။
အဖြူဂျိုး၊ ဆာဂျိုးမတက်သော နှာကြောင်းဖြည့်ကော်
ရေတံခွန်၊ ဆိုင်းဘုဒ်၊ အပြင်ပိုင်းရှိ ကြွေပြားများနှင့် မျက်နှာစာတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော အဖြူဂျိုးတို့ကို ကာကွယ်နိုင်ရန် Weber ၏ဖြေရှင်းနည်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
3 -5မီလိီမီတာကြားအကျယ် ရှိသောလိုင်းကြားများကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သည့် မှိုမဲမဆွဲ နှာကြောင်းဖြည့်ကော်။ ဖန်ဘလောက်တုံးများနှင့် မြေစေး အလှဆင် ကျောက်ပြား များအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။
တုန်ခါမှုနှင့် ပြင်းထန်သော အပူချိန်ဒဏကို ခံနိုင်သော Epoxy သားနှာကြောင်းဖြည့်ကော်။ အတွင်းနှင့်အပြင် နှစ်မျိုးလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသွားအလာများသော ဧရိယာများဖြစ်သည့် ကားပါကင်၊ လေဆိပ်၊ သားသတ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ စသည့်နေရာများတွင် အသုံးဝင်သည်။
ဓာတုတိုက်စားမှုဒဏ် နှင့်ပြင်းထန်သော အပူချိန် ပြောင်းလဲမှုကို ခုခံနိုင်သော အထူးထုတ် ရေကူးကန် နှာကြောင်းဖြည့်ကော်။ အရည်သွေးမြင့်မားမှုကြောင့် တာရှည်ခ့သော ရေကူးကန်၊ စပါး၊ ဆောင်နာ စသည်တို့ကို ဖန်တီးရာတွင် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
Epoxy သားအခြေပြု နှာကြောင်းနှင့် ကြွေပြားကပ်ကော်
မျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆွဲအားအလွန်ကောင်းမွန်သော နှာကြောင်းနှင့် ကြွေပြားကပ်ကော်။ သံ၊ ကြွေပြား၊ ကျေက်နှင့် သန့်ရှင်းမှုလိုအပ်သော ဧရိယာအမျိုးမျိုးတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။